Cabdirashiid Xasan Mataan Oo Iska Casilay Xilkii iyo Xubinnimadii Xisbiga Waddani iyo Sababaha Uu Cuskaday | Ogaalnews
Cabdirashiid Xasan Mataan Oo Iska Casilay Xilkii iyo Xubinnimadii Xisbiga Waddani iyo Sababaha Uu Cuskaday
August 6, 2017 | Published by: admin
Hargeysa, 06 August, 2017(Ogaal):- Xoghayihii Waaxda Warfaafinta Xisbiga Mucaaradka ah ee Waddani Cabdirashiid Xasan Mataan, ayaa shalay shaaciyey inuu si rasmi ah isaga casilay oo uu uga baxay Xisbigaas oo uu ka mid ahaa illaa horraantii 2016-kii, ka dib markii uu bila ka hor wakhtigaa iska casilay Musharraxnimadii jagada Madaxweyne Ku-xigeenka Xisbiga UCID oo uu u taagnaa.
Cabdirashiid Xasan Mataan oo inkastoo uu xilkaas Xoghayaha Garabta Saxaafadda ugu magacawnaa Xisbiga Waddani, haddana intii sannadkan lagu jiray aan ka dhex-muuqan Waddani, ayaa shalay mar uu Warbaahinta qaar kula hadlay magaalada Hargeysa caddeeyey inuu muddadaas aanu ka dhex-muuqan hawlgallada Xisbiga-ba uu saluugsanaa nidaamka hoggaamineed iyo higsi ee Xisbigaas, laga bilaabo shalayna uu ka baxay.
“Waxaan ahaa Mucaarad adag, waxaan jeclaa inaan halkii ka sii wado mucaaradadda, waxaanan u holladay inaan ku biiro Xisbiga Waddani, waxaanan galay 9-ka bishii 2-aad 2016-kii, halkaa si weyn baa la iigu soo dhaweeyey, waxaanan islahaa waad xoojin doontaa Xisbiga, waxaanad ku biirin doontaa wixii sixitaan ah. Waxaad ogtihiin in muddo sannad ku dhawba Warbaahintu is-weydiinayeen mawqifka aan ka qabo Xisbiga, maaddaama oo aanan ka muuqan Shaashadaha Xisbiga Waddani.” Sidaa ayuu yidhi Cabdirashiid.
Waxa uu Cabdirashiid Xasan Mataan oo hadalkiisa sii watay, intaas ku ladhay; “Haddaba, maanta (shalay) waxaan idiin caddaynayaa sababihii aan uga maqnaa Shaashadda Xisbigu inay ahayd saluug aan ka qaaday hannaanka maamul, nidaamka ololaha, Hadafka Xisbiga iyo Hoggaamintiisa-ba. Sidaa darteed, Maanta oo Sabti ah (shalay) 5-ta bisha 8-aad 2017, waxaan ku qancay inaanan la sii socon karin Xisbiga Waddani.”
Cabdirashiid waxa uu ku dooday inaanu Siyaasaddu ahayn wax meel taagnaada, balse ay tahay wax u baahan marwalba qiimayn, waxaanu yidhi; “Waxaanan halkan ka caddaynayaa inaan ka baxay Xisbiga Waddani, Siyaasaddu maaha mid taagan ee waa mid marwalba u baahan qiimaynteeda iyo go’aan-qaadashadeeda, Qaran hoggaamintiisu waxay u baahan tahay Hadaf ay Runtu hoggaaminayso, Hadaf ay Daacadnimadu hagayso, Hadaf leh aragti iyo higsi fog, hadaf ay ka reebban tahay danaysi shaqsi oo lagu danaysanayo Xisbiga, laguna gaadhayo Tartan.”
“Waxaan u mahad-celinayaa Bulshadii aannu soo wada shaqaynay muddadii aan joogay Xisbiga Waddani, Bulshadii ku qanacsanayd hoggaamintayda oo intooda badani ila qabay saluuggan, waxaan leeyahay waakaa go’aankaygi, wixii talo ah ee ah danta guud ee Somaliland iyo ta gaar ee gobolka Awdal, waxaynu ka tashan doonnaa dib haddii Allaah yidhaahdo.” Sidaa ayuu yidhi gebo-gabadii hadalkiisa Cabdirashiid Xasan Mataan.